Tsy mahazaka fanehoan-kevitra ny mpitondra | NewsMada
Nisy ny toromarika ny mpitondra indrindra amin’ny fitandroana filaminana, amin’ny fampandraisana fepetra hentitra amin’ireo mpanome baiko sy mpitarika korontana eto amin’ny firenena, farany teo.
Azon’ny vahoaka ve izany? Ho an’ny olom-pirenena tsotra, ny lehiben’ny dahalo sy ny lehiben’ny jiolahy manafika, ohatra, no hoe mpanome baiko sy mpitarika korontana eto amin’ny firenena, indrindra eo amin’ny fiarahamonina ifotony.
Rehefa mba nisy ve ny baiko hentitra sy fampandraisana andraikitra ny mpitandro filaminana amin’izay asan-dahalo? Raha nisy, tsy hita izay fandriampahalemana ifotony. Mbola mahazo vahana ny fitsaram-bahoaka etsy sy eroa. Anisan’ny manakorontana firenena ireo.
Fanakorontanana firenena sy fiainam-bahoaka izay koa ny fandrobana sy ady tany etsy sy eroa, ny harem-pirenena anjakan’ny vahiny, ny kolikoly, ny kiantranoantrano, ny tsimatimanota, ny fanamparam-pahefana… Mba nisy baiko hentitra?
Mby ao an-tsaina amin’ny hoe korontana mila fandrasaina fepetra amin’ireo mpanome baiko sy mpitarika izany ny karazana hetsika: fidinana an-dalambe, famoriam-bahoaka, fanehoan-kevitra… Tsy ambonin-javatra izay fiainam-bahoaka?
Ny fiarovan-tena sy fiarovan-tseza no zava-dehibe mahamaika ny mpitondra. Hany ka soketaina ho manakorontana sy manongam-panjakana izay mitady hihetsika rehetra hoe misy ambadika politika.
Tsy misy avela hikofoka izany ny isan-tsehatra sy isan’ambaratonga, na izay lafiny sosialy tsotra indrindra aza. Hanao ahoana? Misy farany sy fetrany ny zava-drehetra, miotrika sy mihamasaka ireny karazam-pitarainana sy fitakiana ireny.
Hipoaka na ho ela na ho haingana? Amin’izany, tsy fitakiana isan-tsehatra intsony no hitranga, fa ny fialana na fanalana mpitondra ankapobeny. Vokatry ny famoretana amin’ny jadona, fa tsy inona.
Efa nitranga hatrany izany teo amin’ny tantaram-pirenena, fa tsy mahay maka lesona ny mpitondra… miaro tena sy miaro seza fotsiny. Ho vita ve ny famoritra lava ny vahoaka, nefa manao ny tsy mety sy tsy miraharaha azy ny tena?